Cabdilaahi-jawaan Oo Hoggaamiyenimada Xirsi Isu Cumaamaday Ku Tilmaamay Baaddil Aan Xeerarka Iyo Shuruucda Meelna Kasoo Gelin | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Cabdilaahi-jawaan Oo Hoggaamiyenimada Xirsi Isu Cumaamaday Ku Tilmaamay Baaddil Aan Xeerarka Iyo Shuruucda Meelna Kasoo Gelin
“Innaga xeerkeennu sida uu dhigayo waa Qaab madaxtooyo inoogumana jirto hoggaamiye, wixii la samaynayaana waa inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka iyo xeerarka distoorka ka farcama……”Cabdilaahi Jawaan.
Hargeysa:(Hubaal)-la-taliyaha madaxweynaha ee dhinaca doorashooyinka Md. Cabdilaahi Xaaji Cumar(cabdilaahi-jawaan), ayaa sharci-darro ku tilmaamay xilka hoggaamiyaha ee uu dhawaan xisbiga WADDANI shaaciyey inuu nidaamkiisa kusoo daray, isla-markaana la qorsheeyey in loo cumaamado Ex. Wasiir Xirsi Cali Xaaji Xasan. La-taliye Cabdilaahi Jawaan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa si cad u sheegay inaanu xilka HOGGAAMIYE ahayn mid la jaanqaadi kara nidaamka uu distoorkeenu u dhisan yahay iyo weliba xeerarka u yaalla axsaabta qaranka.
Ugu horrayn Cabdilaahi Jawaan waxa uu sharraxay cidda yeelan karta xilka HOGGAAMIYE, waxana uu yidhi,“Xisbiyada adduunku nidaam bay leeyihiin, xisbi kastaana waxa uu ku socdaa distoorka dalkiisa iyo xeerarka doorashooyinka iyo hannaanka dimuqraadiyadda dalkaas u dejisan. Innagana dalkeenu waa hoggaamin madaxtooyo, dalalka qaarna waa Baarlamaan oo Baarlamaanka ayaa dawladda dhala oo ay kasoo baxdaa, qaarna waa madaxtooyo oo dadweynaha ayaa toos u doorta madaxweynaha iyo ku-xigeenkoosa.”
Cabdilaahi Jawaan oo hadalkiisa sii wata, waxa uu sheegay inuu nidaamka ay Somaliland ku dhaqantaa yahay mid oggol oo kali ah guddoomiye xisbi,“Nidaamka innagu aynu nahay waa nidaam madaxtooyo, marka xisbiyada laga hadlayona guddoomiye Xisbi ayaa jira, Nidaamka Baarlamaanka ee ra’isal wasaaraha lehna waxa ay leeyihiin hoggaamiye Xisbi.” Ayuu yidhi Cabdilaahi Jawaan.
Waxa uu si mug leh u sharraxay waxa uu qabto HOGGAAMIYE xisbi, waxana uu si cad u sheegay inaanay xeerarka dalka meelna kasoo gelin oo uu baadil yahay, isaga oo axsaabtana usoo jeediyey inay xeerarka dalka dhawraan, waxana uu yidhi,“Hoggaamiyaha xisbigu waa ninka xisbiga ugu sarreeya ee haddii uu xisbigaasi doorashada helo hadhow ra’isal wasaaraha noqanaya, kuwaas ayaan hoggaamiye samaysta, laakiin innaga xeerkeennu sida uu dhigayo waa Qaab madaxtooyo inoogumana jirto hoggaamiye, wixii la samaynayaana waa inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka iyo xeerarka distoorka ka farcama ee xeerka doorashada iyo ka xisbiyada intaba. waxan leeyahay xisbiyadu waa inay waafajiyaan waxa ay ku tallaabsanayaan sharcigana way garanayaane sida uu yahay halloo dhawro.”